» हेटौँडाको मुख्य चोकमै पैसा चोर्न आएको समूह रित्तो हात फर्कनुपरेपछि….
हेटौँडाको मुख्य चोकमै पैसा चोर्न आएको समूह रित्तो हात फर्कनुपरेपछि….
९ भाद्र २०७७, मंगलवार १७:५३
हेटौँडाको मुख्य चोकमै सोमबार मध्यराति डकैती गर्ने समूहले हंगामा मच्चाएको छ । मकवानपुर तेक्वान्दो जिल्ला कार्यसमिति कार्यालयमा तोडफोडसमेत भएको छ ।
हेटौँडा– ४, पारिजातपथस्थित खेलकुद कभर्डहलमा रहेको तेक्वान्दो कार्यालयमा सोमबार राति करिब १२ बजे तोडफोड भएको मकवानपुर प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
पारिजातपथ बाक्लो बस्ती भएको स्थान हो । स्थानीय एक महिलाका अनुसार ४ जनाको समूहमा आएको समूहले कार्यालयको स्टिल दराज, टेबुलमा तोडफोड गरेका हुन् ।
अचम्मको कुरा, चोरी गर्ने उद्देश्यले आएको समूहले कार्यालयबाट एउटा कागज पनि चोरी गरेको छैन । प्रहरीका अनुसार उनीहरू पैसा चोरी गर्ने मुख्य उद्देश्यले तेक्वान्दो कार्यालयका प्रवेश गरेका थिए । ‘पैसा चोर्न आएको समूहले कार्यालयमा पैसा नभेटेपछि तोडफोड गरेको हो । दराज र अध्यक्षको टेबुलमा क्षति पुगेको छ,’ प्रहरी नायव उपरीक्षक ईन्द्रबहादुर रानाले भने ।
तेक्वान्दो कार्यालयमा एउटा लामो भेन्टिलेसन र दुईवटा ढोका छन् । चोरी गर्ने समूह भेन्टिलेसनबाट प्रवेश गरेर कार्यालयको ढोकाबाट निस्किएको तेक्वान्दो जिल्ला कार्यसमिति अध्यक्ष लालकाजीरत्न वज्राचार्यले बताए ।
उनीहरूले विशेष गरी दराज र टेबुलको घर्राको ताला तोडेका छन् । ‘चोरहरूको ध्यान पैसामा रहेछ । उनीहरूको नजर पहिला घर्रामा गएको छ । कतै पैसा नभएपछि कार्यालयमा तोडफोड गरेर निस्किएछन्,’ अध्यक्ष वज्राचार्यले भने ।
कार्यालयको कुनै भौतिक संरचना चोरी नभएको उनको भनाइ छ । कभर्डहल क्षेत्रमा सीसीक्यामेरा नहुँदा चोरहरूको पहिचान गर्न नसकिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक रानाले बताए ।
तोडफोड गर्ने युवाहरूको समूह लागूऔषध प्रयोगकर्ता रहेको आशंका प्रहरीलाई छ । तेक्वान्दो जिल्ला कार्यसमितिले प्रहरीमा कार्यालय तोडफोड गर्नेलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएको छ । तोडफोडमा संलग्नको खोजी भइरहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक रानाले जानकारी दिए । ‘सीसीक्यामेरा नुहँदा तोडफोडमा संलग्नहरूको पहिचान गर्न समस्या भएको छ । घटनालाई सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । दोषी चाँडै पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ,’ रानाले भने ।
तोडफोडमा संलग्नहरूले घरेलु हतियार बोकेको स्थानीय महिलालाई उद्धृत गर्दै तेक्वान्दो कार्यसमितिका अध्यक्ष वज्राचार्यले बताए ।
‘स्थानीय महिलाले ४ जनाको समूहलाई राति १२ बजे देख्नुभएको रहेछ । उनीहरूको हातमा घरेलु हतियार थियो भन्ने जानकारी छ,’ महिलालाई उद्धृत गर्दै वज्राचार्यले भने । शिलापत्रबाट ।